Wareysiga Dr. Eduardo Oliveira oo ka tirsan Jaamacadda Louvain, Belgium - AfricArXiv
Dr. Eduardo Oliveira, oo ka socda Jaamacadda Louvain, Belgium, waa qorsheeye istiraatiiji ah oo ka shaqeeya qorsheynta isticmaalka dhulka ee xuduudaha isticmaalka dhulka ee Koonfurta Afrika.
Taariikhda shabakadda: ORCID iD // LinkedIn // Cilmi baaris // Aqoonyahan Google
Eduardo waa qorsheeye istiraatiiji ah oo dhul ballaadhan lehna toban sano oo hawlo cilmi baaris ah oo ku saabsan tacliinta sare oo ay weheliso shan sano oo khibrad xirfadeed ah oo ku saabsan qorshaynta, maamulka, maaraynta mashruuca iyo wacyigalinta sayniska. Guulihiisa waxbarasho ee ugu weyni waa natiijada iskaashi cilmiyaysan ee dhinacyada istiraatiijiyadda dhul ballaarsiga iyo maamulka magaalooyinka ee horumarinta waara ee gobollada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika, iyo tan iyo 2019 ee horumarinta reer miyiga ee xuduudaha isticmaalka dhulka, gaar ahaan Koonfur-bari Afrika ee Mozambique, halkaas oo inta badan dadka reer miyiga ah waxay ku tiirsan yihiin dhul iyo kheyraad kale oo dabiici ah si loo xaqiijiyo nolosha qoysaskooda.
Iyada oo loo marayo kormeerahayga iyo hogaamiyaha mashruuca Prof. Patrick Meyfroidt ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1047-9794
Haa, gudaha Munich Shakhsi RePEc Archive (MPRA). MPRA waa hindise ay sameeyeen aqoonyahanno dhaqaaleyahanno ah REPEc shabakad ka socota dalal kala duwan waxayna ku socotaa mas'uuliyadda Maktabadda Jaamacadda Munich, Jarmalka. Maktabadda Jaamacadda Munich waa qayb ka mid ah Jaamacadda Munich.
Dhammaan shaqadayda daabacan waxaa laga heli karaa aniga Macluumaadka Aqoonyahan Google
Shaqooyinkeyga oo lagu daabacay MPRA waxaa laga heli karaa https://mpra.ub.uni-muenchen.de/view/people/Oliveira=3AEduardo=3A=3A.html
Shaqadayda lagu daabacay AfricArXiv ayaa laga heli karaa https://osf.io/preprints/africarxiv/hu9xv/
Waxay ku habboon tahay in la horumariyo hannaanka istiraatiijiyadeed ee istiraatiijiga ah ee heerka bulshada ee habka is-beddelka wada-soo-saarka ee nidaamyada dhulka mustaqbalka ee gobollada xuduudaha, gaar ahaan Waqooyiga Mozambique. Natiijooyinka la filayo ee cilmi-baaristeyda, oo lagu qabtay mashruuca Golaha Cilmi-baarista Yurub MIDLAND, waxay aqoonsan doontaa iswaafajinta iyo ganacsiga ka dhexeeya caqabadaha isticmaalka dhulka ku saleysan maxalliga ah, iyo danaha caalamiga ah ee dhulka.
Sida loo hagaajiyo maamulka nidaamka dhulka iyo joogtaynta xuduudaha isticmaalka dhulka waa su'aasha hordhaca ah ee cilmi baarista. Waxaan rajeynayaa inaan horumariyo geeddi-socodka istiraatiijiga ah ee qorsheynta dhulka oo (i) isu keenaya jilayaal guud iyo kuwa gaar loo leeyahay oo ka hawlgala miisaanno kala duwan, min heer caalami illaa heer maxalli ah, (ii) waxay ku dhismeysaa soo-jeedimihii dhowaa ee ahaa in la isku daro sayniska nidaamyada dhulka iyo qorshaynta muuqaalka dhulka nidaamyada qaabdhismeedka ”, (iii) xisaabaadka isweydaarsiga u dhexeeya arrimaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee sii waara, (iv) waxay mideyneysaa qalabka soo ifbaxaya ee hoggaanka gaarka loo leeyahay iyo suuq ku saleysan maamulka isticmaalka dhulka. Hadafka guud ee soo socda ayaa ah in la dhiso sanduuqyo qalab-farsameed iyo taageerooyin aragti ahaaneed si loo fahmo xaaladaha hoosta looga dhigayo in lagu kobciyo is-beddelka ula-kaca ah ee nidaamyada dhulka ee Waqooyiga Mozambique iyo wixii ka dambeeya.
Waxaan dooneynaa inaan ku daabacno natiijooyinka wax soo saarka maxalliga ah ee Mozambique. Waxaan rajeyneynaa inaan qabanqaabino aqoon isweydaarsiyo ka dhacaya Mozambique iyo Belgium, haddii xaaladaha caafimaad ee la xiriira COVID-19 ay oggolaadaan. Hadda waxaan maamulaa madal isgaarsiinta sayniska https://twitter.com/Scienc4Society Kaas oo aan ugu talo galay inaan kula xiriiro dadweynaha guud ahaan Afrika.
Ma haysaa wax fikrado ah ama su'aalo ah Dr. Oliveira? Waad uga tagi kartaa iyaga sanduuqa faallooyinka ee hoose.
Tags: Soo saarista cilmi baarista Afrikamarin furan